Home Wararka Maanta DEG DEG: Putin oo arrin xasaasi oo lama filaan ah ugu hanjabay...
DEG DEG: Putin oo arrin xasaasi oo lama filaan ah ugu hanjabay Ukraine
Moscow (Allbanaadir Media) – Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u hanjabay jiritaanka dalnimo ee Ukraine xilli duulaanka ciidamadiisa ay ka wadaan dalka deriska la ah uu wajahayo iskacaabin xooggan, islamarkaana dhaqaalaha dalkiisa ay cunaha qabteen cunaqabateeno sii kordhaya.
Dadaalladii ugu dambeeyey ee Mosow looga hakinayo dhaqaalaha adduunka, ayaa shirkadaha nidaamka lacagaha la isugu gudbiyo ee Visa iyo Mastercard ee fadhigeedu yahay Mareykanka waxay ku dhowaaqeen inay hakinayaan howlahoodii Ruushka.
Kyiv ayaa ugu baaqday Reer Galbeedka inay sare u qaadaan kaalmada militari ee ay siiyaan, oo ay ka mid yihiin diyaraadaha dagaalka.
Madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa sidoo kale ka codsaday dalalka dersika la ah ee Yurubta Bari inay siiyaan diyaaradaha ay Ruushka sameeyeen oo duuliyayaasha Ukraine loo tababaray inay duuliyaan.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ayaa werisay in Washington ay ka shaqeyneyso heshiis ay la galeyso Warsaw, kaasi oo Poland ay Ukraine ku siineyso diyaaradaha dagaalka ee xilligii Soviet-ka, looguna beddelayo kuwa F-16 ee Mareykanku sameeyo.
Islamarkaana, Putin ayaa xoojiyey digniinta uu ujeedinayo NATO, isaga oo ku hanjabay dagaal baaxad weyn, haddii aag duulimaadyada ka caagan la hirgeliyo.
Madaxweynaha Ruushka ayaa sidoo kale ku gacan sayray warar la isla dhex-marayo oo sheegaya in Kremlin-ka uu qorsheynayo in xeer militari uga dhowaaqo Ruushka.